Prof. Cabdalla Mansuur oo Xubnaha AGA ee Muqdisho uga War-bixiyay Shirkii Jabuuti - AGA - Akadeemiya Goboleedka AfSoomaaliga
Home Wararka AGA Prof. Cabdalla Mansuur oo Xubnaha AGA ee Muqdisho uga War-bixiyay Shirkii Jabuuti
Kulan aan caadi aheyn oo looga hadlayay shirkii wada-tashiga ee 28-30/3/2022 ka dhacay dalka Jabuuti, ayna ka soo qeyb-galeen madax ka tirsan masuuliyiintii shirkaasi ka qeyb-gashay iyo xubnaha goosan hawleedka Akadeemiye-Goboleedka AfSoomaaliga ee Muqdisho ayaa 19/4/2022, waxaa lagu qabtay xarunta Ku-meel-gaarka ah ee Akadeemiyadu ay ku leedahay magaalada Muqdisho.
Shirkaasi oo uu shir-guddoominayay Guddoomiyaha Qabanqaabada 50-guurada farta Soomaaliga, Shirweynaha 3-aad ee AGA iyo Daahfurka xarunta Akadeemiyada ee Muqdisho Bare sare Cabdalla Cumar Mansuur ayaa si faahfaahsan waxaa loogu soo bandhiggay baahidii keentay qabashada shirkii Jabuuti iyo war murtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi.
Bare sare Cabdalla Mansuur oo ugu horeyntii kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in go’aannadii ka soo baxay shirkaasi ay ugu muhiimsanayeen:-
In la qabto shirweynihii 3aad ee Akdeemiye-Goboleedka Afsoomaaliga.
In la xuso 50-guuradii ka soo wareegtay qoraalka farta Soomaaliga.
In loo hawlgalo furitaanka xarunta dhexe ee Akadeemiyada ee Muqdisho.
Guddoomiyha guddiga qabanqaabada oo hadalkiisa sii wata ayaa caddeeyay in shirku isku raacay in Xildhibana Maryan Cariif Qaasin ay sii ahaato Ku-simaha Guddoomiyaha AGA tan iyo inta laga dooranayo Guddoomiye cusub, dhanka kale waxa uu kula dardaarmay xubnaha AGA ee Muqdisho in ay dhexda u xertaan sidii loo fulin lahaa qoddobadii ka soo baxay shirkii Jabuuti, isaga oo u mahadceliyay Madaxweynaha iyo dawlada Jabuuti oo shirkaasi marti-galisay.
Sidoo kale, waxaa kulankaasi ka hadlay Prof. Mustafa C/llaahi Feyruus iyo Cabdinaasir Yuusuf Macallin oo ka mid ahaa masuuliyiintii shirkaasi ka qeyb-gashay, waxaana ay sheegeen in shirkaasi uu ahaa fursad fiican oo looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa horumrinta shaqooyinka ay u xilsaaran tahay Akadeemiye-Goboleedka AfSoomaaliga, iyaga oo soo bandhiggay shaqooyinka hor-tabinta mudan ee la doonayo in la qabto.
Qaar ka mid ah xubnaha Muqdisho oo iyaguna kulankaasi ka hadlay ayaa soo jeediyay tallooyin ku saabsan sida ugu haboon ee looga mira dhalin karo waajibaadka ay u xilsaaran tahay AGA.